Maalinta: Maarso 20, 2019
Giresun Castle oo leh Cable-ga
Giresun wuxuu helaa gaadhiga fiilada. Iyada oo ay ugu wacan tahay shaqooyinka socda muddo ku dhow 6 sano, saxiixyo ayaa lala saxeexday shirkadda Shiinaha oo bixin doonta maalgelinta mashruuca. Duqa magaalada Giresun Kerim Aksu ayaa war wanaagsan siiyay dadka reer Giresun shir jaraaid [More ...]
Mashruuca 'Y Pedestrian First' 'oo uu bilaabay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee 81 si loo soo jiito mudnaanta dadka lugeynaya ee taraafikada, Dawladda Hoose ee Magaalada Antalya waxay sidoo kale hirgalisay codsigii ugu horreeyay. Horteeda Dugsiga xirfadaha ee Akdeniz ee cilmiga bulshada [More ...]
Mashruuca Naadiga ah ee loo yaqaan 'Ankara' oo ah Brandenburg oo la furay
ANKAPARK, oo hore loogu yiqiin K Wonderland Eurasia ”, oo Ankara ka dhigi doonta magaalo sumad leh oo gacan ka geysan doonta dalxiiska, ayaa loo furay adeegga iyadoo xafladda uu ka qeybgalay Madaxweyne Recep Tayyip Erdoyian. Madaxweyne Erdogan, 1 milyan [More ...]
Goobta Mustafakemalpaşa hadda waa ammaan
Bursa - Wadada weyn ee Izmir ee ku taal albaabka Mustafakemalpaşa Tatkavaklı Bridge Isweydaarsiga, ayaa lagu furay xaflad. Duqa magaalada Bursa Alinur Aktaş, kaabayaasha degmada ayaa dib loo cusbooneysiin doonaa bilowga mashruuca Yurub [More ...]
Degmooyinka loo Doono, Jadwalka Isgaadhsiinta Eskişehir Joojiya!
Eskişehir wuxuu martigalin doonaa Madaxweyne Tayyip Erdo tomorrowan berrito. Marka la eego tallaabooyinka amniga ee uu qaaday taliyuhu booqashadan ka hor, qaar ka mid ah adeegyada taraamyada ayaa la kansalay. [More ...]
Saldhigga Tareenka ee Edirne Saldhig Militari oo Dib-u-habeyn Lagu Sameeyo Natiijada Tender Result Resender Result Result Resant Tender Result Resender Resant Result Resender Result Resant Tender Result Resination Tilmaan Gobolka Tareenka TCDD 1. Qiyaasta qarashka Maamulka Iibsiga Kontroolka Kontaroolka Gobolku (TCDD) waa 2018 / 436837 [More ...]
Dhismaha Gawaarida Karakoy oo ah Xarunta Maxkamadda ee Dhismaha Dhismaha Shaqada Abaalmarinta Ganacsiga
Qabanqaabinta Saldhigga Karaköy sida Shaqada Dhismaha Saldhiga Brake Sababta oo ah Qandaraaska Qandaraaska Waddada Tareenka ee Waddanka Turkiga (TCDD) oo ah Agabka Maxalliga ah ee Agabka (TCDD) iyada oo qiimaha ugu badan ee GCC loo tiriyey 1/2018 waa TL 467224. [More ...]
Arifiye Pamukova Joogtada ah Isuduwaha Isuduwaha Diyaarinta iyo Asphalt Result Tender Result TCDD 1. Agabka Agabka Agaasinka ee Wadada Tareenka ee Waddanka Turkiga (TCDD) 2018/680577 Qiimaha ku dhawaad ​​ee GCC lambar 1.041.261,10 TL [More ...]
Heshiiska Shaqaalaha ee Kardemir Happy End
Kordhinta waxsoosaarka iyo noocyada kala duwan ee badeecooyinka ay siiso, macaamiisheeda, saamilayaasheeda qaybinta lagu dhawaaqay qaybinta, alaabada ceyriinka ah ee la cuno iyo agabyada ay adeegsadaan [More ...]
Shirkadaha Bursa oo ku yaal Fair Fair
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Bursa (BTSO) marka loo eego baaxadda hay'adda Global Fair Agency Project wakiilada shirkadaha warshadaha, caasimada Spain, ayaa lagu qabtay magaalada Automechanika Fair. BTSO, Dunida Ganacsiga ee Bursa si loo xoojiyo dhoofinta iyo tartanka [More ...]
Waqooyiga Marmara Dooxada Kurtköy-Akyazı Qeybta 4. Waa la furay
Wadada Waqooyiga Marmara Kurtköy-Akyazı qeybta 4. ayaa dadweynaha loo soo bandhigay xaflad ay ka soo qeyb galeen Madaxweynaha Jamhuuriyadda, Recep Tayyip Erdopan, iyo Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan. Isgoyska Kurtköy-Liman ee Waqooyiga Marmara [More ...]
Kala-wareegga Guud ee Sultanbeyli iyo Esenyurt
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan, Sultanbeyli iyo Esenyurt ayaa bilaabaya dalabka kala guurka wada jirka ah. Wasiirka Turhan, Sultanbeyli iyo Esenyurt Toll Boards (HGS) iyo Automatic [More ...]
Sida ku xusan go’aanka ay qaadatay Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli laguna hirgaliyay banaanbaxa Erdogan maalintii shalay, taraamku wuxuu qaadi doonaa rakaab lacag la’aan ah isu imaatinka wadajirka ah ee Kemal Kğlıçdaroğlu iyo Meral Aksener, oo la qaban doono berrito. [More ...]